“မိန်းမ” (ဇနီး) နဲ့ “ကီပင်” (စမော) ကွာခြား ချက် – Let Pan Daily
မိန်းမ (ဇနီး) နဲ့ ကီပင် (စမော) ကွာခြား ချက်
မိန်းမက TV နဲ့တူတယ်။ ကီပင်က စမတ်ဖုန်း နဲ့ တူတယ်။ ခင်ဗျား…. အိမ်မှာနေရင် TV ကြည့်ပေမယ့် အပြင်ထွက် ရင်တော့ ဖုန်းကိုပဲ ယူသွားတယ် မဟုတ် လား။ ဒါတောင်… TV ကို တခါတရံ မှ ကြည့်ပြီး၊ ဖုန်းကိုတော့ အချိန်ပြည့် ပွတ်နေတာပဲလေ။
သို့သော်… TV က အစီအစဉ်တွေ ကို အလကားကြည့် လို့ ရပေမယ့်၊ ဖုန်းကတော့ ငွေမဖြည့်တာနဲ့ လိုင်းဖြတ်သွားပြီသာမှတ်။ TV က ကြီးတယ်၊ လေးတယ်၊ အိုဟောင်းတဲ့အထိ အကြာကြီး သုံးရတယ်။ ဖုန်းကတော့ သေးတယ် လှပတယ် အလွယ်တကူ သယ်သွားလို့ ရတယ်၊ ၂ နှစ်ကို တစ်ကြိမ်လောက် အသစ်လဲ ကိုင်လို့ ရတယ်။
TV နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုန်ကျ စရိတ် သိပ်မများပေမယ့် ဖုန်းကတော့ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်တယ်။ TV မှာ ရီမုပါလို့ အဝေးကနေ ထိန်းလို့ ရပေမယ့်၊ ဖုန်းကတော့ မရဘူး။ ဖုန်းကတော့ ပြောလို့လည်း ရတယ် နားထောင်လို့လည်း ရတယ်။
TV ကတော့ နားထောင်ရုံ သက်သက်ပဲ၊ ပြန်ပြော လို့ မရဘူး။ အရေးကြီးဆုံးအချက်က… TV မှာ ဗိုင်းရပ်စ် မရှိပေမယ့်၊ ဖုန်းကျတော့ မတော်တာ ဝင်ကြည့်မိရင် ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်နိုင်သလို ဟက်သွားလို့လည်း ရတယ်။
ဒီကြားထဲ အထားမတော်ရင် သူများက မ, သွားရော။ ဆိုတော့… ဖုန်းပွတ်တာလည်း ပွတ်ပေါ့။ အိမ်က TV ကြီး ကိုလည်း မကြာခဏ ဖွင့် ဖွင့် ပေး။ မဖွင့်တာကြာလို့ ဂျီးစို့သွားရင် ဆိုင်သွားပြခါမှ သူများဖွင့်သွားအုံးမယ်။
မိနျးမ (ဇနီး) နဲ့ ကီပငျ (စမော) ကှာခွား ခကျြ
မိနျးမက TV နဲ့တူတယျ။ ကီပငျက စမတျဖုနျး နဲ့ တူတယျ။ ခငျဗြား…. အိမျမှာနရေငျ TV ကွညျ့ပမေယျ့ အပွငျထှကျ ရငျတော့ ဖုနျးကိုပဲ ယူသှားတယျ မဟုတျ လား။ ဒါတောငျ… TV ကို တခါတရံ မှ ကွညျ့ပွီး၊ ဖုနျးကိုတော့ အခြိနျပွညျ့ ပှတျနတောပဲလေ။
သို့သျော… TV က အစီအစဉျတှေ ကို အလကားကွညျ့ လို့ ရပမေယျ့၊ ဖုနျးကတော့ ငှမေဖွညျ့တာနဲ့ လိုငျးဖွတျသှားပွီသာမှတျ။ TV က ကွီးတယျ၊ လေးတယျ၊ အိုဟောငျးတဲ့အထိ အကွာကွီး သုံးရတယျ။ ဖုနျးကတော့ သေးတယျ လှပတယျ အလှယျတကူ သယျသှားလို့ ရတယျ၊ ၂ နှဈကို တဈကွိမျလောကျ အသဈလဲ ကိုငျလို့ ရတယျ။
TV နဲ့ ပတျသကျလို့ ကုနျကြ စရိတျ သိပျမမြားပမေယျ့ ဖုနျးကတော့ ကုနျကစြရိတျ မွငျ့တယျ။ TV မှာ ရီမုပါလို့ အဝေးကနေ ထိနျးလို့ ရပမေယျ့၊ ဖုနျးကတော့ မရဘူး။ ဖုနျးကတော့ ပွောလို့လညျး ရတယျ နားထောငျလို့လညျး ရတယျ။
TV ကတော့ နားထောငျရုံ သကျသကျပဲ၊ ပွနျပွော လို့ မရဘူး။ အရေးကွီးဆုံးအခကျြက… TV မှာ ဗိုငျးရပျဈ မရှိပမေယျ့၊ ဖုနျးကတြော့ မတျောတာ ဝငျကွညျ့မိရငျ ဗိုငျးရပျဈကိုကျနိုငျသလို ဟကျသှားလို့လညျး ရတယျ။
ဒီကွားထဲ အထားမတျောရငျ သူမြားက မ, သှားရော။ ဆိုတော့… ဖုနျးပှတျတာလညျး ပှတျပေါ့။ အိမျက TV ကွီး ကိုလညျး မကွာခဏ ဖှငျ့ ဖှငျ့ ပေး။ မဖှငျ့တာကွာလို့ ဂြီးစို့သှားရငျ ဆိုငျသှားပွခါမှ သူမြားဖှငျ့သှားအုံးမယျ။
သနျ၎ကို – ရမျးဘာသာပွနျသညျ။
ရှေ အတု နဲ့ အစဈ ခှဲခွား နညျးမြား (မြှ‌‌ဝေပေးပါအုံး …)